साताको AGENDA : हामीलाई सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर हिलो छ्याप्न मिल्छ ? - Ratopati
साताको AGENDA : हामीलाई सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर हिलो छ्याप्न मिल्छ ?
एमाले नेतृत्व सरकार बजेटमा व्यस्त हुँदा माधव नेपाल समूहले ‘मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र’ को नामबाट चलाएको वैचारिक बहस कार्यक्रमलाई लिएर संस्थापन पक्षका थुप्रै नेता आक्रोशित बने । सचिव प्रदीप ज्ञवालीले त माधव नेपालले पार्टीको बेइज्जत गरेको आरोप नै लगाए । नेपाल नेतृत्वको विचार समूहका प्रभावशाली युवा नेता तथा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले ती आरोपको जवाफ रातोपाटीकर्मी रमन पौडेलसँग व्यक्त गरेका छन् :
के थियो मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको बहस ?
मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा हामीले तीन विषयमा छलफल गरेका थियौँ । देशभरिका करिब साढे चार सय नेताको सहभागितामा हामीले यो कार्यक्रम गर्यौँ ।
पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा हामीले उठाएका विषय ०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।
महाधिवेशनले गरेको फैसलाबमोजिम पार्टी र राष्ट्रिय निर्माणको कार्यदिशा के हुन्छ, त्यसलाई कसरी हेर्ने र व्याख्या गर्ने भन्ने विषयबारे छलफल भयो ।
परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिको विकास कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा छलफल गरेका थियौँ ।
यसका लागि पार्टी बलियो हुनुपर्छ । र, हामीले चलाइराखेको छलफललाई सुदृढ बनाउने र घोषित विधिबमोजिम पार्टी सञ्चालन र सुदृढ बनाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय थियो । हामीले भन्दै आएको न्यायसहितको समानतामा आधारित आर्थिक क्रान्तिको कार्यक्रम के हो र कसरी लागू गर्ने विषयमा आधारित रहेर कार्यक्रपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।
घनश्याम भुसाल, विजय पौडेल र डा. गोविन्द थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती कार्यपत्रमा पार्टीका पदाधिकारी, स्थायी कमिटीका नेताले कमेन्ट गर्नुभयो । हामीले छलफल गर्यौँ ।
कार्यक्रम ज्यादै राम्रो भयो । कार्यक्रमको उद्देश्य र प्राप्त भएका सफलता भोलिका दिनमा पार्टी जीवनमा धेरै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास हो ।
जहाँसम्म मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको विषयमा कतिपय प्रश्न उठाइएको छ । नवौँ महाधिवेशनभन्दा अगाडि नै हाम्रो तर्फबाट कस्तो दस्तावेज पेस गर्ने, जबजलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलाउने प्लेटफर्मका रूपमा निर्माण गरेका थियौँ ।
यो आफैँ नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको वैधानिक संस्था हो । यो पार्टीको जनसंगठन वा जनवर्गीय संगठन होइन । यो पार्टीको घोषित विधिअनुसार चल्दैन । सरकारको कानुनबमोजिम त्यसले दिएको दायराभित्र चल्ने संस्था हो ।
यद्यपि, त्यसमा एमालेका हामी नेता÷कार्यकर्ता भएकाले यसका उद्देश्य जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल व्याख्या गर्दै समृद्ध बनाउँदै जाने हो ।
यसको माध्यमबाट पार्टीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरूप काम गर्दै आएका छौँ । यो संस्थाप्रति कसैले पनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन ।
मदन भण्डारीको नाममा अर्को मदन भण्डारी फाउन्डेसन, मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीलगायत विभिन्न संस्था पनि चलिरहेकै छन् । ती सबैमा पार्टीकै नेता छन् ।
हामीले पार्टीको आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि हामीले उठाएका थियौँ कि नेताहरूको नाममा खुलेका जति पनि संस्था छन्– ‘साहना प्रतिष्ठान’, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान’, ‘पुष्पलाल प्रतिष्ठान’, ‘मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठान’ आदि ।
यी सबै प्रतिष्ठानलाई पार्टीको एउटै छाताभित्र राखेर एउटै विधिबाट सञ्चालन गर्ने नीति बनाउनुपर्यो । होइन भने यसरी चल्ने हो भने खुलेका संस्था आफ्नो विधिविधानअनुसार चल्ने उनीहरूको अधिकार हुन्छ ।
पार्टीको एउटै वैधानिक फोरमभित्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले नै उठाइरहेको कुरा हो । यद्यपि, नेताको नाममा यसरी अध्ययन केन्द्र चलाउँछु भन्छ भने कानुनले दिएको अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन ।
मदन–आश्रीत स्मृति दिवसको आयोजनालाई लिएर बाहिर सोसल मिडियामा जे–जति उच्छृंखल अभिव्यक्ति आएका छन् । त्यसप्रति म दुख व्यक्त गर्छु ।
उद्घाटनसत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, जसले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पार्टीमा योगदान गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा पार्टी निर्माणको विषय र वैचारिक विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो विचार दिनुभयो । मलाई के लाग्छ भने पार्टी जति बलियो र व्यवस्थित हुन्छन्, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि बलियो हुन्छ ।
अहिले एमालेभित्र केही नेताबीचको समझदारीपूर्ण ढंगबाट चल्ने, सामूहिक नेतृत्वअनुसार र पार्टीको घोषित विधानअनुसार चल्ने कुरामा केही समस्या छन् ।
नटबोल्ट केही खुस्किएका छन्, केही कमजोर भएका छन् । त्यसलाई तेल लगाउने र कस्ने गर्नुपर्छ । यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । एक्लै चल्न खोजेर हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ भन्ने अर्थमा नेताहरूले सकारात्मक आसयबाट विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरूले कुरा बंग्याएर नेताहरूलाई खुइल्याउन खोज्नुभयो । चाहे त्यो पार्टी अध्यक्षलाई खुइल्याएको कुरा होस् वा माधव नेपाल, झलनाथलाई । यी कुनै पनि कुराको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
त्यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरेका डुकुमेन्टका आधारमा पार्टीको विधि र विधानविरुद्ध छन् भने हामी छलफल गर्न तयार छौँ । त्यहाँभित्र जे विषयमा छलफल भएको हो, त्यसमा जान नचाहने र अरू कुरा गरेर आलोचना गर्नु राम्रो होइन । त्यो पनि यस्तो आलोचनाले जिम्मेवार तहको नेतालाई शोभायमान बनाउन सक्दैन ।
कसरी भयो सरकारलाई असहयोग ?
हामीले सरकारलाई असहयोग गर्यौँ भन्ने अभिव्यक्ति र आरोप मैले सुनेँ । तर, मलाई अचम्म लाग्यो । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा महिना दिनअघि मात्रै तात्कालिक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आधिकारिक रूपमा कांग्रेसको सहयोग लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अभ्यास गर्नुभयो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन नै माओवादीले फिर्ता लिएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अवस्था सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो जटिल परिस्थितिमा यो सरकार जोगाउनुपर्छ, टिकाउनुपर्छ भनेर कांग्रेससँग गला मिलाइसकेको माओवादीलाई नेताहरूले जसरी फिर्ता ल्याउनुभयो । त्यसको सम्मान हुनुपर्दैन ? त्यसरी प्रयत्न गरेको कुरा बिर्सेर फेरि सरकारको विपक्षमा लाग्नुभयो भन्नुको अर्थ हुन्छ ? यसको कुनै तर्क हुन्छ ?
यदि यो सरकार ढले हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो भने त प्रचण्डले छाडेर हिँड्दा चुप लागेर घरै बस्न पनि सकिन्थ्यो नि । अनि यो नीति कार्यक्रम केही पनि नआउने निश्चित थियो । यस्ता गलत आरोप लगाएर भ्रम सिर्जना गर्नुको केही अर्थ छैन ।
हालैमात्र भद्र सहमतिको चर्चा बजारमा सुरु भएको छ । त्यहाँ के सहमति भएको हो, त्यो कुनै दिन ‘एक्सपोज’ होला । तर पनि त्यही अध्ययन केन्द्रको फोरमबाट प्रस्ताव पारित गरेका छौँ ।
त्यहाँ पारित भएको प्रस्ताव सबैले पढ्न सकिन्छ । अफिसियल कपी प्रिन्ट गरिराखिएको छ । त्यो फोरमबाट जबजको प्रकाशमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा जानुको विकल्प छैन भन्ने हामीले पास गरेका छौँ ।
राष्ट्रिय सहमतिबाट यो संविधान रक्षा गर्ने, लागू गर्ने र कम्तीमा अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेस, माओवादी र एमालेको सहमतिको आवश्यकता छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।
सहमतिका लागि आश्वासन गरेका छौँ । यस्तो भन्नु के यो सरकार ढाल्न खोजेको हो ? जुन कुरा हामीले पारित गर्यौँ लिखित रूपमा भनेका छौँ, त्यो कुरा नहेर्ने तर बाहिर अनेक कुरा गर्दै हिँड्नुको अर्थ छैन ।
यसैले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार ढालेर फेरि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहिराख्ने । अरू प्रतिपक्षमा रहेकाले आन्दोलन गरिराख्ने कुराले के परिणाम दिन्छ ।
मुलुकले जुन निकास परिणाम खोजिराखेको छ । बजेट र नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आज मिलेर जानुको विकल्प छैन ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने भनेका छौँ, हामीले त्यसका लागि मिलेरै जानुपर्छ । भारतले हामीमाथि जस्तो वक्रदृष्टि राखेको छ, त्यसबाट राष्ट्रलाई जोगाउनका लागि मिलेर जानुपर्छ । यस्ता निष्कर्षसहित हिँडेका
हामीलाई सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर हिलो छ्याप्न मिल्छ ?
मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले कार्यक्रम राखेको ११ र १२ गते हो । आज १९ गते भइसक्यो । योबीचमा त्यतिखेरै अध्यक्षले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर के भएको हो भनेर सोध्न सकिन्थ्यो ।
माधव नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक भए मिडियामा भन्नुभन्दा स्थायी कमिटी बैठक डाकेर त्यहीँ सोधेको भए हुन्थ्यो नि । पार्टीको घोषित विधिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने र सामूहिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने कुरा हो । यसमा समस्या छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको दुई महिना हुन लाग्यो । अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको छैन । प्रदेश कमिटी बनाउने भनिएको थियो तर ती कमिटी बनाउनेबारे बैठक भइराखेका छैनन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जे विषयमा टिप्पणी उठेका थिए, त्यसको सम्बोधनभन्दा पनि निरन्तरता भइराखेको छ । यी यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पार्टी नेतृत्वले हो । हामीलाई कि त भन्न सक्नुपर्यो, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र प्रतिबन्धित हो भनेर ।
यो राज्य, सरकार र यो पार्टीबाट मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र प्रतिबन्धित हो त ? यदि त्यस्तो हो भने हामीलाई बोलाएर भन्नुपर्यो कि यो प्रतिबन्धित संस्था हो भनेर । होइन भने हामीले छलफल गर्नु स्वाभाविक हो ।
बहस भइराखेको छ, पार्टीमा कुरा नहुने मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमी बनाउने । यस्ता संस्थाले के–के काम गर्ने हो ? पार्टीले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने ? अध्ययन केन्द्रले के गर्न पाउने र नपाउने ? अन्य संस्थाको क्षेत्राधिकारबारे पार्टीले विधि बनाएर निर्णय गर्नुपर्यो । हामी मान्न तयार छौँ ।
हामीले जे छलफल गर्यौँ, पार्टीलाई बलियो बनाउने, घोषित नीतिलाई स्पष्ट गर्ने र पार्टीको योजनाबमोजिम युवा परिचालन गर्नेजस्ता काम भएका छन् । यस्ता छलफलबाट कोही आत्तिनुपर्दैन ।
सरकारले राम्रो बजेट ल्यायो । यसलाई कसरी लागू गर्ने । दीर्घकालीन र अल्पकालीन महत्वका आधारमा हाम्रा योजना अघि बढाउने कुरा नै त हो, हामीले छलफल गरेको । यसमा सरकारलाई असहयोग गर्ने कुरै छैन ।
माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने चलखेल भनियो
पार्टी अध्यक्ष हुन ७० वर्ष नपुगेको हुनुपर्छ भनेर यही महाधिवेशनबाट पारित गरिएको कुरा हो । ७० वर्ष नपुगेको एमाले केन्द्रीय कमिटी नेता अध्यक्ष बन्ने योग्यता राख्छ ।
स्वयम् केपी ओली ७० पुग्नुभएको छैन । झलनाथ खनाल पुग्नुभएको छैन । अब १०औँ महाधिवेशनमा पनि पुग्नुहुन्न । माधव नेपाल पनि ७० पुग्नुहुने छैन ।
त्यो उमेर समूहभन्दा तलका जोकोही पनि अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सक्छ । तर, पार्टीको महाधिवेशन सकिएको दुई वर्षमात्रै भयो । यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हो ।
आजैदेखि १०औँ महाधिवेशनको अध्यक्ष उम्मेदवारबारे हामीले छलफल चलायौँ भनेर शंका नै गर्नुपर्दैन । महाधिवेशन घोषणा भएपछि घोषणा गरौँला । यदि यस्ता आरोप नै लगाउने भए हामी पनि कसैलाई आरोप लगाउन सकिएला ।
१५ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएको मान्छे, माधव नेपाल जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । कुनै कार्यक्रममा जानै नपाउने हो त ? हिँड्नै नपाउने हो त ?
कि त्यो भनिदिनुपर्यो । क–कसलाई त्यसो भनिएको हो, त्यो खुलाउनुपर्यो । पार्टीले त्यो पनि निर्णय गरेर भन्नुपर्यो नि, माधव नेपाल यो कार्यक्रममा जान पाउने यो कार्यक्रममा जान नपाउने भनेर ।
कार्यक्रममा जानेबित्तिकै अध्यक्ष बन्न गयो भनेर आरोप लगाउने ? कसले भनेको हो त्यो । माधव नेपालले म अध्यक्षको उम्मेदवार हो भनेको त मैले कतै सुनेको छैन । कार्यक्रममा जाँदैमा अध्यक्ष बन्न नै गयो भन्ने कसरी भयो ?
फेरि इच्छा हुँदा नपाउने कुरा पनि कहाँ छ र ? भोलि उहाँले पार्टीको विधानअनुसार इच्छा देखाउनुभयो भने त पाउनुहुन्छ नि । उठ्ने कि नउठ्ने उहाँको निजी कुरा हो ।
महाधिवेशन आइसकेपछि उहाँलाई हाम्रोतर्फबाट के सल्लाह दिनुपर्छ त्यतिबेलै दिउँला । उठ्नुस् भन्न मन लागे उठ्नुस् भनौँला नउठ्नुस भन्न मन लागे नउठ्नुस् भनौँला । आज माधव नेपाल पार्टीको काममा देशभरि जाने कुरालाई अध्यक्ष बन्न हिँड्यो भन्नु आफैँमा शोभायमान होइन ।